नेपाली चलचित्र उद्योगमा नक्कली नोटको तरंग - अपराध - साप्ताहिक
२ जेठमा चलचित्र निर्माता माधव वाग्ले नक्कली नोटको कारोबार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि अहिले चलचित्र बजार तातेको छ । निर्माता वाग्लेसहित ६ जनालाई प्रहरीले नक्कली नेपाली नोटको कारोबारमा संलग्न भएको अभियोगमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उनीहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न तीन स्थानबाट २ करोड ६० लाख ८६ हजार नक्कली नोटसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा निर्माता वाग्लेसहित सुर्खेतका महेन्द्र बोगटी, सिन्धुलीका सुजित तामाङ तथा साजन तामाङ छन् । प्रहरीले नक्कली नोट छाप्ने बागबजारस्थित नवज्योति प्रेसका सञ्चालक प्रकाश सुवेदी तथा ओमजय भोलेबाबा प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक विकेश नापितलाई समेत पक्राउ गरेको छ ।
निर्माता वाग्लेलाई प्रहरीले २ जेठमा नक्सालस्थित उनकै कोठाबाट झन्डै २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नक्कली नोटसहित गिरफ्तार गरेको हो । त्यसअघि प्रहरीले १ जेठमा कमलपोखरी बस्ने सुर्खेतका महेन्द्र बोगटीलाई १ लाख २० हजार बराबरको नक्कली नोटसहित गिरफ्तार गरेको थियो । २ जेठमै प्रहरीले सिन्धुली घर भै ललितपुर लुभु बस्ने सुजित तामाङ र साजन तामाङको कोठाबाट ७ लाख ४३ हजार बराबरको नक्कली नोटसहित पक्राउ गरेको थियो भने सोही दिन नक्कली नोट छापेको अभियोगमा प्रेसका सञ्चालकद्वय सुवेदी र नापित पक्राउ परेका थिए ।
पक्राउ परेका ६ जनालाई प्रहरीले खोटा चलन महलअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेर ६ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ । अपराध प्रमाणित भए मुलुकी ऐनको खोटा चलन महलअन्तर्गत बिगो बराबर (बरामद नक्कली नोट बराबरको रकम) जरिवाना तथा १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । ‘अपराध प्रमाणित भए कसको कति इन्भलमेन्ट छ, त्यसका आधारमा सजाय हुन्छ,’ महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी योगेन्द्रसिंह थापाले भने ।
आफ्नो गिरफ्तारीपछि अस्वस्थ भएका निर्माता वाग्लेको प्रहरीको निगरानीमा अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । उनीसँगै पक्राउ परेकाहरू अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरूको बयान लिने क्रम जारी रहेको डिएसपी थापाले बताए । ‘हामीले राष्ट्र बैंकको राय पनि लिइसकेका छौं, यसरी नक्कली नोट छाप्नु गैरकानुनी हो,’ डिएसपी थापाले भने, ‘चलचित्रकै लागि भएको भए डिस्ट्रोय गर्नुपथ्र्यो, बजारमा त्यो नोट कसरी पुग्यो ?’ नक्कली नोटको भित्री भागमा सानो अक्षरमा ‘चलचित्र प्रयोजनका लागि’ छापिएको छ, तर प्रहरी दाबीअनुसार उक्त वाक्य झुक्किने किसिमले लेखिएको छ ।
चलचित्र निर्माण पक्षले भने ‘चंगा चेट’का लागि छापिएको पैसा आर्ट डाइरेक्सन टिमबाट दुरुपयोग भएको जनाएको छ । निर्देशक दीपेन्द्र के खनालका अनुसार नक्कली नोट बनाउने जिम्मा आर्ट टिमलाई दिइएको थियो । ‘हाम्रो चलचित्रमा केही पैसा देखाउनुपर्ने थियो,’ उनले साप्ताहिकसँग भने, ‘माधव दाइले उक्त काम आर्ट टिमलाई जिम्मा दिनुभएछ । जिम्मा पाएपछि आर्ट टिमले उक्त नक्कली नोट तयार पार्‍यो । केही पैसा माधव दाइले पछि काम लाग्ला भनेर आफै राख्नुभएछ । केही बन्डल नोट आर्टका सुिजत तामाङ आदिले राखेछन् ।’ निर्देशक खनालका अनुसार सुजितले राखेको त्यही बन्डलको पैसा उनका साथी महेन्द्र बोगटीले रक्सी खाएको बिल तिर्न प्रयोग गरेपछि यो समस्या सिर्जना भएको हो ।
‘अब केस अदालतमा जाँदैछ,’ उनले भने, ‘केही दिनमै के हुन्छ थाहा होला ।’ खनालका अनुसार निर्माता वाग्लेले चलचित्रमा चाहिने नक्कली नोटको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी आर्ट टिमलाई दिएका थिए, उनीहरूले कसरी त्यो नोटको प्रबन्ध गरे ? त्यसमा वाग्ले स्वयं पनि जानकार नरहेको उनको दाबी छ । ‘हामीबाट ऐन कानुन हेर्ने कुरामा गल्ती भयो । नेपालमा निर्माताहरू चेक मात्र काट्छन्, चलचित्रका काम अरूले नै गर्छन्,’ उनले थपे, ‘नेपाली चलचित्रका लागि ठूलो लेसन भयो । चलचित्रका लागि बम, बन्दुक सबै चाहिन्छ अब कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन्छ । सम्बन्धित पक्षले पनि यी विषयहरू कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस बाटो तय गर्लान् ।’
‘चंगाचेट’ का निर्माता वाग्लेले पनि आफूले चलचित्र छायांकनका लागि उक्त नक्कली नोट चाहिएको र त्यस्तो नक्कली नोट तयार पार्ने जिम्मा आर्ट टिमलाई दिएको प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित मित्रनगरमा छ— सुमधुर क्याफे तथा खाजाघर । १ जेठमा त्यहीँ खाजा खान पुगे, कमलपोखरी बस्दै आएका सुर्खेतका २४ वर्षीय महेन्द्र बोगटी । उनले त्यहाँ खाजा खाए, ड्रिंक्स गरे । झन्डै २ हजारभन्दा माथिको बिल आयो । बोगटीले हजारका तीनवटा नोट रेस्टुराँ सञ्चालकलाई दिए । सञ्चालकलाई महेन्द्रले दिएको नोटमा शंका लाग्यो । त्यसपछि उनी महानगरी प्रहरी प्रभाग गोंगबु पुगे ।
लगत्तै प्रहरीले उक्त घटनामाथि अनुसन्धान थाल्यो । तत्कालै गोंगबु प्रभागको प्रहरी टोली घटनाको अनुसन्धानमा खटियो । सोधपुछ तथा खान तलासीका क्रममा महेन्द्रबाट प्रहरीले १ लाख २० हजार नक्कली नोट बरामद गर्‍यो ।
उनले प्रहरीलाई नक्कली नोटका विषयमा थप सूचना दिए । प्रहरी त्यही सूचनाका आधारमा सिन्धुली घर भै लुभु बस्ने २४ वर्षीय सुजित तामाङ तथा १९ वर्षीय साजन तामाङको डेरामा पुग्यो । त्यही क्रममा तामाङद्वयको कोठा खानतलासी गर्दा प्रहरीले ७ लाख ४३ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँ फेला पार्‍यो । उनीहरूले चलचित्र सुटिङका लागि निर्माता वाग्लेले आफूहरूलाई उक्त नोट दिएको प्रहरीलाई बताए ।
लगतै प्रहरी वाग्लेको खोजीमा उनको नक्साल चारढुङ्गेस्थित प्रिन्सेस मुभिजको कार्यालय पुग्यो । निर्माता माधव वाग्लेको अफिसबाट प्रहरीले १ हजार दरका थप २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बरामद गर्‍यो । यही क्रममा प्रहरीले निर्माता वाग्लेलाई समेत गिरफ्तार गर्‍यो । लगतै प्रहरीले उक्त नोट छाप्ने बागबजारस्थित नवज्योति प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक ३६ वर्षीय प्रकाश सुवेदी तथा भोलेबाबा प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालक भक्तपुरका ३९ वर्षीय विकेश नापितलाई पनि पक्राउ गर्‍यो । सुवेदीले नापितलाई उक्त नोट छाप्न दिएको र नापितको छापाखानाबाट नोट छापिएको प्रहरीले जनाएको छ । निर्माता वाग्लेले आफूले निर्माण गरिरहेको चलचित्र ‘चंगाचेट’का लागि उक्त नक्कली नोट छापेको प्रहरीलाई बताएका छन् । वाग्लेले उक्त नक्कली नोटको मिसयुज भएको बताएका छन् ।
कतिपयले वाग्लेजस्ता चर्चित निर्माताले चलचित्रमा देखाउन यसरी नक्कली नोट छपाउनु नै गलत भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् भने कतिपय नक्कली नोट छापिसकेपछि त्यसलाई नष्ट नगर्नु नै उनको गल्ती भएको बताइरहेका छन् । यद्यपि प्रहरीले उक्त घटनामाथि अनुसन्धान जारी राखेको र अदालतमा जाने तयारीमा रहेकाले घटनाको यथार्थ विवरण केही दिनमै सतहमा आउने बताएको छ ।
के गर्छन् अन्य चलचित्रमा
चलचित्रमा नक्कली रुपैयाँ प्रयोग हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन । वाग्लेले नै निर्माण गरेको ‘लुट–२’ मा पनि नक्कली नोट प्रयोग भएको छ । ‘त्यसमा हामीले कागजको बन्डल बनाएर तलमाथि पैसा बेरेर देखाएका थियौं,’ उक्त चलचित्रका निर्देशक निश्चल बस्नेत भन्छन्, ‘चलचित्रमा यसरी नक्कली नोट प्रयोग गर्दा हामीलाई अपराधी झै प्रस्तुत गर्न खोजियो ।’ उनले मिडियाले आफूहरूप्रति अन्याय गरेको गुनासोसमेत गरे ।
यस्तै, यादव पौडेल निर्माता रहेको ‘जात्रा’ मा पनि नक्कली नोट प्रयोग भएको छ । विशाल भण्डारीले निर्देशन गरेको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ मा पनि नोट प्रयोग गरिएको छ । उक्त चलचित्रको निर्माण पक्षकाअनुसार पर्दामा देखाइएको सबै नोट सक्कली नै थियो ।
त्यसो भए ती चलचित्रमा कसरी नक्कली नोट प्रयोग गरिएको थियो त ? जात्राका निर्माता यादव पौडेल आफूहरूले चलचित्रमा नक्कली नोट देखाउँदा फरक तरिका अपनाएको बताउँछन् । ‘फोटोकपी पेपर हजार रुपैयाँको साइजमा राखेर बन्डल बनायौं र त्यसको माथि रबरले बाधेर हजारको नोट राख्यौं,’ उनले भने, ‘३ करोड देखाउनुपर्ने थियो रबरले बाँधेर सजिलै देखाउन सकियो ।’
चलचित्रमा प्राय: यसरी नै पैसा देखाइन्छ । पेपर उज्यालो देखिने भएकाले कतिपयले बन्डलको छेउमा माटो दल्छन् त कसैले मेकअप पनि गर्छन् । करोडौं रुपैयाँ छरपस्ट देखाउनुपर्दा भने त्यसलाई छाप्नुको विकल्प नहुने धारणा पनि केही निर्माता/निर्देशकको छ ।